ရခိုင်အရေးကြောင့် နိုင်ငံ မျက်နှာပျက်ဟု ဦးသိန်းစိန် ပြော | ဧရာဝတီ
ရခိုင်အရေးကြောင့် နိုင်ငံ မျက်နှာပျက်ဟု ဦးသိန်းစိန် ပြော
ဧရာဝတီ| November 18, 2012 | Hits:391
8 | | ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြ်ို့ ရပ်ကွက် ၃ နှင့် ဘ၀မ်းချောင်းဝရပ်ကွက်တို့၏ မီးလောင်ပြင် မြင်ကွင်းများကို အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့က တွေ့မြင်ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ မွတ်စလင်တွေအကြား အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် တိုင်းပြည် မျက်နှာပျက်ရတယ်လို့ မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပြီး အိုးအိမ်မဲ့ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်လည်နေရာချထားရေး အပါအဝင် နိုင်ငံသားဖြစ်ပိုင်ခွင့်ကို ထည့်သွင်းသုံးသပ်နေတယ်လို့လည်း ကုလသမဂ္ဂကို ပေးတဲ့စာမှာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက် နေပြည်တော်မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က နိုင်ငံတော် ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင်ဆရာတော်ကြီး အမှူးပြုတဲ့ ဆရာတော်တွေ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အကြီးအကဲတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ နိုင်ငံအများအပြားက လက်ခံကျင့်သုံးလျက်ရှိသော လူ့အခွင့်အရေးစံချိန် စံညွှန်းများ၊ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက် ပါက ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် မျက်နှာပျက်ဖွယ်ရာ အခြေအနေများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပြီး “ရခိုင်ဒေသတွင် နေထိုင်ကြသော ပြည်သူများအနေဖြင့် ကိုယ့်ပြည်နယ်၊ ကိုယ့်လူမျိုးစု၏ အကျိုးစီးပွားကို ရှေးရှုရမည် ဖြစ်သော်လည်း မိမိအကျိုးစီးပွား တစ်ခုတည်းကိုသာကွက်၍ ရှုမြင်ခြင်းမပြုဘဲ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အမြင်တရားဖြင့် ရှုမြင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တစ်မျိုးသားလုံး၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ကမ္ဘာ့မိသားစုဝင် နိုင်ငံများအပါအဝင် လူသားအားလုံး၏ အကျိုးစီးပွားကိုပါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှုမြင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်”တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သောကြာနေ့က ကုလသမဂ္ဂကို ပို့တဲ့စာထဲမှာလည်း ဦးသိန်းစိန်နဲ့ နေပြည်တော်အစိုးရဟာ အိုးအိမ်မဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်လည်နေရာချထားရေးကနေ နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရေးထိ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်စရာရှိတာတွေကို ဆက်လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ရေးသားထားကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဘန်ကီမွန်းရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောပါတယ်။
အချိန်ဇယားနဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အသေးစိတ်ကို ရှင်းလင်းစွာ မသိရသေးပေမယ့် နေပြည်တော် တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ကုလသမဂ္ဂထံ ပေးစာတွေဟာ ကောင်းတဲ့ဘက်ကို ဦးတည်နေတာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမား မြန်မာပြည် လာတော့မယ့် အချိန်နဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။
အမေရိကန် သမ္မတအိမ်ဖြူတော်ကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေအပေါ် မြန်မာ အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြာသာပတေးနေ့မှာ ကာကွယ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
“အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက် မြန်မာအစိုးရက တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါ တယ်” လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံကိစ္စရပ်များ (Multilateral Affairs) ဆိုင်ရာ အကြီးတန်း ဒါရိုက်တာ စမန်သာ ပါဝါက သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာလည်း ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံသားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဖို့နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တွေ၊ မွတ်ဆလင်တွေနဲ့ တခြားကျန်တဲ့သူအားလုံးရဲ့ လူမှုဖူလုံရေးအတွက် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ ရေရှည် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေလည်း ရှိသေးတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ မြန်မာပြည်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကန့်ကွက်နေကြတာတွေ အပေါ်မှာလည်း ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးအရတိုးတက်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ တကယ်ဆန္ဒရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြသတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ တိုက်ရိုက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ သမ္မအနေနဲ့ အချိန်အကြာကြီးကတည်းက ဆန္ဒရှိခဲ့တာမို့ အခုခရီးစဉ်ဟာ တကယ်သင့် လျော်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ စမန်သာ ပါဝါက ဆိုပါတယ်။
“ကျမတို့ တိုက်ရိုက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ရတဲ့ အကြောင်းက အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကို ဆုချီးမြင့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီ နိုင်ငံတွေက ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကို ဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့နဲ့ တိုးတက်မှု အရေးပေါ် လိုအပ်နေတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာ တွန်းအားပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ သူက ပြောပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာ ဘာ့ကြောင့် အခုလိုလုပ် ဖို့ သင့်တော်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သူက ဥပမာ ၂ ခုပေးပါသေးတယ်။
“ပထမတခုကတော့ အတော်များများလည်းသိကြတဲ့အတိုင်း မြန်မာအစိုးရက တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ပေါင်းစုံနဲ့ အပစ် အခတ်ရပ်စဲရေး လုပ်ခဲ့တာကို ကျမတို့ တွေ့ရတယ်။ ဒါက ရေရှည်တည်တံ့မယ့်အဖြေတော့မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုတာက နေ့စဉ်နဲ့အမျှ လူတွေ ထိခိုက်အနာတရဖြစ်တာ နည်းနည်းလာတယ်ဆိုတဲ့သဘော။ ဒါဟာ တိုးတက်မှုအစစ်အမှန်ပဲ” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာအစိုးရက ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေအပေါ်မှာလည်း ဒါဟာ “တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့ နယ်ပယ် တစုံလုံးမှာ တိုးတက်မှု အနည်းငယ်ရှိလာတဲ့ ဥပမာ တစ်ခုဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အခုဆိုရင် သိပ်ကို ဆိုးဝါးပြီး အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စရပ်တခုကို ဖြစ်နိုင်သမျှ အမြင့်ဆုံးအဆင့်နဲ့ သွားပြီး တိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အခွင့် အလမ်း ကျမတို့ ရနေပြီ” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဒါ့ပြင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်က ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အကြမ်းဖက် မှုတွေ ရပ်စဲရေးအတွက်သဘောတူညီချက်ရဖို့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအသစ်တွေ မလုပ်ခင်မှာ ပဋိပက္ခကြောင့် ဒုက္ခ ရောက်ရသူတွေအတွက် လူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေ သေသေချာချာ ရနိုင်အောင် ကနဦးဆောင်ရွက်ရမယ်၊ ပြီးတဲ့အခါ ရေရှည်ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအရ နစ်နာမှုတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ်လို့ စမန်သာ ပါဝါက အလေးအနက် ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်အခြေအနေက ရေရှည်ဆက်သွားဖို့ လိုသေးတယ်လို့ သူက အလေးထား ပြောပြန်ပါတယ်။ “ကျမဆိုလိုတာက မြန်မာပြည်မှာ အားလုံး သတိပြုနိုင်တဲ့ တိုးတက်မှုတွေရှိနေပြီ၊ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အများအပြား ထောင်ထဲမှာ ရှိနေကြသေးတယ်၊ အကျဉ်းသားအရေအတွက်ကလည်း အမျိုးမျိုး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အနည်းဆုံး ရာဂဏန်း နဲ့ချီတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ရှိနေဆဲပဲလို့ ကျမတို့ ယူဆပါတယ်” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
“မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးလမ်းစပွင့်လာပြီမို့ သမ္မတအိုဘားမားပြောမယ့် အဓိကအချက်တစ်ခုကတော့ အစိုးရအရာရှိ တွေ အချင်းချင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးကြဖို့လိုတယ်ဆိုတာနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလည်း လွှတ်တော်နဲ့ ပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့ လိုတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေ၊ ဥပဒေပညာရှင်တွေ၊ စီးပွားရေးသမားတွေ၊ တပ်ထဲက အရာရှိအရာခံ အကြပ်တပ်သားတွေ၊ ဆရာဆရာမတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်တော့ မြန်မာပြည်ဟာ နောက်ထပ်အဆင့်တစ် ခုဆီ ဝင်ရောက်နေပြီမို့ အခုအပြောင်းအလဲမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့၊ ပြီးတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ရေရှည်ထိန်းထားဖို့နဲ့ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့အတွက် ဒီနိုင်ငံမှာ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ အပြန် အလှန်ထိန်းညှိမှုတွေကို တည်ဆောက်ကြဖို့ အဓိကထား ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်” လို့ စမန်သာ ပါဝါက ဆိုပါသေးတယ်။
တချိန်တည်းမှာလည်း နိုင်ငံတကာ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ အမေရိကန် ကော်မရှင် (US Commission on International Religious Freedom – USCIRF) က သမ္မတအိုဘားမားထံ စာတစ်စောင်ပို့ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီစာထဲမှာ သူ့ရဲ့မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်အတွင်း ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေအပြင် တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ပဋိပက္ခတွေကြောင့် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ချိုးဖောက်မှုတွေကိုလည်း မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ တိုက်တွန်းထားပါ တယ်။
“တိုင်းရင်းသားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေတွေက မြန်မာအစိုးသစ်အနေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဒီထက်ပိုအားကောင်းလာဖို့၊ ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ဘယ်လောက်ထိ ထပ်လုပ်ရ ဦးမယ်ဆိုတာကို ထုတ်ဖော်ပြသနေပါတယ်” လို့ USCIRF ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ ကက်ထရီနာ လန်တော့စ် (Dr Katrina Lantos) က အဲ့ဒီစာထဲမှာ ပြောထားပါတယ်။
“စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာရှိစဉ်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေ အချိုးဖောက်ဆုံး နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခု အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာလည်း ဒီပုံရိပ်ကို မဖျောက်နိုင်သေး တဲ့အပြင် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေးတွေ လေးစားလိုက်နာတယ်ဆိုတာကို များပြားလှတဲ့ တိုင်းရင်းသား တွေကိုရော ဘာသာရေးအုပ်စုတွေကိုပါ လုံးလုံးလျားလျား အခိုင်အမာ မပြနိုင်သေးပါဘူး” လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။
OIC ရုံးကိစ္စ မြန်မာအစိုးရ တရားဝင် အကြောင်းမကြားသေး
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စ သက်ဆိုင်ရာ လူမျိုးစု ၂ စုတို့ ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရမည်ဟု ကင်တားနားပြော
ရခိုင်ပဋိပက္ခ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ခြိမ်းခြောက်ဟု ကင်တားနား ပြောဆို
9 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website mr TM November 18, 2012 - 7:54 pm	ရခိုင်အရေးကြောင့်ကမ္ဘာမှာမြန်မာမျက်နှာပျက်ရတယ်လို့သမတကြီးရဲ့စကားကိုဖတ်ရတော့ရယ် ချင်မိပါတယ်၊ကျွန်တော့်အထင်တော့သမတကြီးကြောင့်မြန်မာပြည်မျက်နှာပျက်ရတာပါအချိန် မှီထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အမှုတခုကို ၆လကြာတဲ့အထိမဖြေရှင်းနိုင်တာကိုကစဉ်းစားစရာပါ၊ရွှေဝါရောင်အရေးခင်းမှာဘုန်းဘုန်းတွေ ကိုသေနတ်နဲ့ပြစ်သတ်ခဲ့ပြီး ၃ရက်နဲ့အပြတ်ရှင်းနိုင်ရင်ရခိုင်အရေးအခင်းကိုဘာကြောင့်မဖြေရှင်း နိုင်ပါသလဲ?အခုကြမှရိုဟင်ဂျာတွေကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်ပေးဘို့နဲ့ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေနဲ့အတူနေ ထိုင်နိုင်ဘို့ကိုစဉ်းစားပြောဆိုလာတာကအိုဘာမားလာမှာမို့လို့လား?Multilateral Affairs ဆိုင်ရာအကြီးတန်းဒါရိုက်တာစမန်ပါဝါကသတင်းထောက်တွေကိုမြန်မာအစိုးရရဲ့ပွဲစားအဖြစ်နဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေထိန်းသိမ်းနိုင်ဘို့အတွက်မြန်မာအစိုးရကတာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ဆောင်ရွက်ချက် တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်၊တကယ်တော့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသယ်တွေဟာအခုထိ ဘာမှမယ်မယ်ရရကူညီမှုမရသေးပါဘူး။သမတကြီးတဦးအနေနဲ့ကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုယ့်လူမျိုးစု ဆိုတဲ့စကားထက်ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်နိုင်ငံသားဆိုရင်ပိုမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်။
Reply	ထန်ကျင့်ပေါင် November 18, 2012 - 9:18 pm	မြန်မာပြည်မှာ ရခိုင်ပြသနာဖြစ်လာရတာဟာ… ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် အဆိုးဆုံးကတော့ အစိုးရအကြီးအကဲတွေကိုယ်တိုင် ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ပြနေခဲ့ကြတာပါပဲ … ပြည်သူတွေရှဲုအမြင်မှာ သူတို့ကိုသူတော်ကောင်းတွေလို့ အမြင်ရှိလာပြီး အမှတ်ကောင်းကောင်းရမယ် ထင်မှတ်ခဲ့ကြဟန်တူပါတယ် … စစ်ယူနီဖောင်းတွေ ၀တ်ဆင်လျှက်နဲ့ လူမြင်အောင်ဘာသာရေးလုပ်ပြနေကြတာကို စစ်အစိုးရ၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် မမြင်ချင်အဆုံးပါပဲ နေ့စဉ်ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာ နေ့စဉ်မပြတ်ဖော်ပြနေခဲ့ကြတာပါ… နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေး ရောထွေးဆောင်ရွက်ပြီး …. အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးကို ရှေ့တန်းတင်လာကြရင်တော့ ဒီလိုပြသနာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်တို့ခေတ်ကတည်းက အမြော်အမြင်ကြီးမားတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေက ပြောကြားထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် … နိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးဆိုတာ သီးခြားစီသာဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းကို … အကြိတ်အနယ်ဆွေးနွေးအကြံပြုခဲ့ကြပါတယ် …ဆင်ခြင်ကြဖို့သင့်ပါတယ်ဗျာ …. မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘာသာစုံနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အရှိအတိုင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အသိအမှတ်ပြုလက်ခံကြရပါမယ် .. တိုင်းရင်းသားအတော်များများဟာ … ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကိုလည်း သတိပြုကြရပါမယ် … တစ်ဘာသာတည်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့တွေးခေါ်ကြံစည် လုပ်ဆောင်နေကြမယ်ဆိုရင် … အတွင်းပိုင်းမှာ အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းတွေကွဲလာပြီး … နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်လောက် နောက်ကျကျန်ရစ်နေခဲ့တဲ့ ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့ ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ဆိုတာဝေးစွ …တစ်စစီ ပြိုကွဲသွားနိုင်တဲ့အထိ အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်ပါတယ်… ကချင်ပြသနာ ယနေ့အထိ မပြေလည်နိုင်သေးတာဟာလည်း ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရမှုတွေ ပါဝင်နေနိုင်ပါတယ် … အချိန်မီ ဆင်ခြင် ပြင်ဆင်ကြဖို့သင့်ပါတယ်ဗျာ ….
Reply	Myant Linn November 18, 2012 - 10:21 pm	မျက်နှာပျက်စရာ ဖြစ်အောင် ဘယ်သူက စပြီးဖန်တီးတာလဲ။ ကိုယ် ကတဲ့ ဇာတ်ကို ကိုယ်မနိုင်တဲ့အခါ သူများကို အပြစ်ဖို့ရန် ကြိုးပမ်းကြတာ ကတော့ လူကြီးကျင့်ဝတ်နဲ့ မညီဘူးထင်တယ်။ ရခိုင်ပြည်ထဲ၌ အခြေချနေထိုင်လာတဲ့ အဲဒီလူတွေကို နိုင်ငံသားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်း သူတို့ ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်ပိုင်ခွင့်၊ လုပ်ကိုင်စားသောက်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်။ ဒါကြောင့် ရိုးလမ်း၊ အမ်းတောင်ကြားလမ်း၊ ဂွ ငသိုင်းချောင်းလမ်းတွေကို လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး သွားလာခွင့်ပြုဖို့ ဖွင့်ပေးပါ။ တကယ့် စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် တကွက်ချန်တဲ့ လူလည်အလုပ်တော့ မလုပ်ကြပါနဲ့။
Reply	တာတေ November 18, 2012 - 10:59 pm	ဘယ်နေရာမှာတွေလုပ်လုပ်လူတွေကတော့သံသယတွေနဲ့ 
Reply	pps12345 November 18, 2012 - 11:30 pm	ကိုသိန်းစိန် ပြောတာကောင်းပါတယ်။ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူ အများစု ဟာ တပ်မတော် အစိုးရ လက်ထက်မှာ ဝင်ရောက်လာခဲ့သူတွေပါ။ ရခိုင်တွေကလည်း မကျေနပ်ရင် တပ်မတော်ကို ပဲ ပြောသင့်ပါတယ်။ အခုတော့ တိုင်းပြည်မျက်နှာပျက် ရပြီပေါ့။ အစွန်းရောက် ဆိုရင်ဘယ်ဟာမှ မကောင်းဘူးလို့ ဘုရားဟော ထားတာရှိပါတယ်။ အဓိက ပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်က တပ်မတော် အစိုးရ လက်ထက် အဆက်ဆက်မှာ အာဏာ အလွဲသုံးစား လုပ်မှု တွေ များလို့ တိုင်းပြည်မှာ တိုင်းပြည်မှာ တိုင်းတပါးသားတွေ များခဲ့ တယ် ဆိုတာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ သိထားသင့်ပါတယ်။ လူအချင်းချင်း အမုန်းပွားခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ။
Reply	soe lin November 18, 2012 - 11:42 pm	you shouldn’t call ရိုဟင်ဂျာ they are really come from Bangladeshi so should call ဘင်္ဂါလီ
Reply	မင်းကြီးညို November 18, 2012 - 11:50 pm	အင်း၊ အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရော နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်ရင်တော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ
လူဦးရေတွေ(၂)ဆ(၃)ဆလောက် ဖေါင်းပွလာတော့မှာ သေချာတယ်။ ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့မွေးဖွား
နှုန်းကလဲ များလိုက်ပါဘိ။ ဇနီးမယား(၄)ယောက်ထိတောင်ယူကြတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းလူဦးရေ
ထက်တောင် များသွားအုံးမယ်။ ကံဆိုးလိုက်ပါဘိ ကိုရခိုင်တို့ရေ။ ကယ်တော်မူပါဘုရား။
Reply	ရာဇာ November 19, 2012 - 1:07 pm	အသေခံ ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်တတ်သူတွေ ရဲ့ အကြောင်း နားလည် သဘောပေါက် ထားတယ် ဆိုရင် ဂတိတွေကို အလွယ်တကူ မပေးပါနဲ့….မြန်မာတွေမှာ ဒီလိုလုပ်တတ်တဲ့သူ မရှိခဲ့ လေတော့ အခုအခြေအနေ ကို လျှော့မတွက်ပါနဲ့ လို့……………
Reply	့honey November 20, 2012 - 7:31 pm	၇ခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကကော